Iibinta MacBooks ayaa kordhay 94% rubucii koowaad ee sanadkan | Waxaan ka socdaa mac
Iibinta MacBookga ayaa kordhay 94% rubucii koowaad ee sanadkan
Rubucii koowaad ee sanadkan Apple ayaa iibisay ku dhowaad 6 milyan oo MacBooks ah. Tirooyinku waa qiyaas, maaddaama shirkaddu aysan inta badan macluumaad badan ka bixin iibkeeda, in kasta oo ay yihiin tirooyin lagu faano.
Dhab ahaantii waayi cusub ee Macs Silicon Apple Waxay guul u tahay shirkadda. Sharad qatar ah oo ay sameysay Apple, in muddo ah cudur balaaran oo caalami ah, laakiin shaki la’aan midka saxda ah. Oo hadda, iMac kii ugu horreeyay ayaa sidoo kale la muuqda processor M1 ah. Waqtiyada wanaagsan ee Apple, shaki kuma jiro.
Apple waxay iibisay qiyaas 5,7 malaayiin ee MacBooks rubuca hore ee 2021, oo ku saleysan qiyaasaha iibka laptop-ka cusub ee la daabacay maanta by Falanqaynta Istaraatiijiyadda.
Tirooyinka waxaa ka mid ah iibinta moodooyinka MacBook Pro y MacBook Air, marka laga reebo Mac mini, Mac Pro, iyo iMac. Taasi waa, kaliya laptop-yada shirkadda.
Apple wuxuu ahaa kii afraad ee sameeya laptop-ka ugu weyn aduunka oo dhan, wuxuu dabagal ku sameeyay Dell, HP iyo Lenovo, iyadoo saddexda shirkadood ay daabulayeen inta udhaxeysa 10 ilaa 16 milyan oo laptop ah rubucii hore ee sanadka 2021.
5,7 milyan oo Laptops ah oo ay iibisay Apple ayaa kordhay boqolkiiba 94 marka loo eego 2,9 milyan ee la soo diray sanadkii hore. Waxaas oo dhan waxay ku mahadsan yihiin koritaanka xoogan ee ka imanaya baahida joogtada ah ee isticmaaleyaasha ka shaqeeya ama wax ku barta guriga sababo la xiriira faafka, iyo aqbalaadda wanaagsan ee adeegsadayaasha Mac-yada cusub oo leh processor. M1.
Saamiyada Apple ee rubuca rubuc waxay ahayd 8.4 boqolkiiba, marka la barbar dhigo 7.8 boqolkiiba sanadkii hore. Lenovo y HP waxay sii wadaan inay noqdaan hogaamiyaasha suuqa, iyagoo iibinaya kombuyuutarro kaladuwan oo kaladuwan oo Windows ka garab shaqeeya Chromebooks, oo leh koboc xoogan oo dhanka waxbarashada ah, inta badan qiimahooda.
Iibsasho wanaagsan mahad M1
Wadarta iibka laptop-ka ayaa kordhay boqolkiiba 81 sanadkii-sanadka oo dhan dhammaan ganacsatada waaweyn. Apple Gaar ahaan, waxaa laga yaabaa inay aragtay koboc weyn, iyada oo ay ugu wacan tahay bilawgii Nofeembar ee 1-inch MacBook Pro M13 iyo MacBook Air.
Apple waxay u badan tahay inay sii wadi doonto kobaca iibka PC-ga iyada oo isku diyaarineysa inay soo bandhigto qaabab cusub, xitaa ka xoog badan Apple Silicon dabayaaqada sanadkaan. Xanta waxay soo jeedineysaa inay jiraan qaabab casriyeysan oo ah 16-inji MacBook Pro diyaar u ah in la bilaabo, iyo a iMac M1 ka weyn kan hadda 24-inji ah. Apple sidoo kale waxaa laga filayaa inay soo saarto MacBook cusub iyo MacBook Pro cusub, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan imaan ilaa 2022.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Iibinta MacBookga ayaa kordhay 94% rubucii koowaad ee sanadkan
Hoyga Kahor Xilliga Madoobaadka XNUMX Trailer Koowaad Hada Waa La Heli Karaa
Madaxweynaha IBM wuxuu leeyahay 'chip chip' wuxuu sii socon karaa laba sano oo dheeri ah